भक्तपुरमा फोहोरको समस्या - Online Majdoor
भक्तपुरमा फोहोरको समस्या
५ आश्विन २०७६, आईतवार ०१:४९
अनिषा दुमरु, आदर्श
भक्तपुर नगरपालिकाले नियमित गाडीमा फोहोर सङ्कलन गरे पनि सार्वजनिक स्थानमा फोहोर जम्मा गर्ने समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । गीत बजाएर फोहोर सङ्कलन गर्न आउने व्यवस्था गरे पनि नगरका विभिन्न स्थानमा फोहोरको डङ्गुर देखिन्छ । बिहान सबेरै बाहिर निस्कँदा नगरभित्र विभिन्न ठाउँमा फोहोर थुपारिएको देख्छौं । नः पुखु, पलिख्य, सुकुलढोका, आदर्श बसस्टपलगायतका स्थानमा फोहोरको डङ्गुर अझै देखिन्छ ।
नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर राख्ने भाँडो राखिदिएको छ । तर, भाँडो रित्तै हुन्छ । फोहोरको भने सानोतिनो पहाड नै हुन्छ । फोहोर फाल्ने भाँडो सँगै हुँदा पनि फोहोर भुँईमा फाल्ने मानिसलाई के भन्ने होला ? फोहोर सडकमा फाल्दा नगरपालिका असफल हुने सोच्ने मानिसले पो त्यसो गरे कि ? तर, फोहोर सडकमा फाल्दा कोही अरु मानिस असफल हुने होइन, फाल्ने मान्छेको बेसोमतमात्र देखिने हो ।
आजभोलि भक्तपुर नगरमा कहीं फोहोर देख्दा मात्र पनि मन कसो कसो डिगमिग भएजस्तो लाग्छ । फोहोर फाल्ने मान्छेलाई पनि त्यस्तो हुनुपर्ने होइन र !
नगरपालिकामा आकस्मिक फोहोर सङ्कलनको व्यवस्था हुनुपर्ने हो कि ? सबै मानिसले सभ्य भएर व्यवहार गरे त्यसो व्यवस्था गर्न पर्दैनथ्यो । तर, मानिसको व्यवहारमा अझै पनि सुधार्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । त्यसकारण नसुध्रिएको मानिसले फाल्ने फोहोरका कारण नगरलाई फोहोर बनाउन त भएन ।
फोहोर सङ्कलन गर्ने नगरपालिकाको कदम प्रशंसनीय छ । तर, फोहोर सङ्कलन गर्ने आउने व्यवस्था भए देखि घरबाहिर चोक, बाटोको फोहोर भने त्यही रहने समस्या छ । घरभित्रको फोहोर गीत बजाएर आउने गाडीमा हाल्यो । चोकको फोहोर नउठाउँदा फोहोर बढ्ने नै भयो । त्यसो त चोकबासीले नै यो काम गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । तर, चोकबासीलाई पनि यो त नपाको काम भन्ने पर्दो रहेछ कि ।